Coupe မီးဖိုချောင်ထိုင်ခုံ - ဒီဇိုင်းမဂ္ဂဇင်း
မီးဖိုချောင်ထိုင်ခုံ ဤထိုင်ခုံကိုလူတစ်ယောက်ကြားနေထိုင်သည့်ကိုယ်ဟန်အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။ လူတို့၏နေ့စဉ်အပြုအမူများကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်၊ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်လူများသည်ခဏတာအနားယူရန်အတွက်မီးဖိုချောင်တွင်ထိုင်ခြင်းကဲ့သို့သောအချိန်တိုတောင်းသောထိုင်ခုံများ၌ထိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲ့ကထိုအပြုအမူကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်ဤမစင်ကိုဖန်တီးရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှု၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ဤထိုင်ခုံကိုအနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
စီမံကိန်းအမည် : Coupe, ဒီဇိုင်နာနာမည် : Nagano Interior Industry Co.,Ltd., သုံးစွဲသူ၏အမည် : Nagano Interior Industry Co.,Ltd.
မီးဖိုချောင်ထိုင်ခုံ Nagano Interior Industry Co.,Ltd. Coupe